Ukuphela kwemveliso ye-Wii U kuqinisekisiwe | Iindaba zeGajethi
Ukuphela kwemveliso ye-Wii U kuqinisekisiwe
I-Wii U iye Enye yezona mpazamo zinkulu ezazenziwe yiNintendo yeJapan. Emva kwamarhe amaninzi namhlanje inkampani yaseJapan iqinisekisile ukuphela kwemveliso yeWii U ngewebhusayithi yayo yaseJapan. Ukuza kuthi ga ngoku babesenza iimodeli ezimbini kuphela, ngenxa yokunqongophala kwebango kwintengiso. Ukuphela kwemveliso ye-Wii U yayiyimbali yokubhubha okwabhengezwa ixesha elide, ngakumbi emva kokuboniswa, kwividiyo, yekhonsoli uNintendo afuna ukukhuphisana nayo kunye nommelwane wayo uSony kunye nekhomputha enkulu yeMicrosoft.
I-Wii U yafika kwimarike ngo-2012Ukusukela ngoko ukuthengiswa kwale khonsoli akuzange kuzalisekise konke ukuqikelela kwenkampani yaseJapan, ngaphandle kokuba kuye kwathengiswa ngalo lonke ixesha inkampani iqala umdlalo omtsha ohambelana neli qonga, kuba abo baphuhlisiweyo babengabokuqala ukusilela. Eli qonga kunye neqonga lokudlala ngaphandle kwemidlalo alisebenzi.
Inkampani yaseJapan wanyanzelwa ukuba azame ukucacisa kubasebenzisi ukuba i-Wii U isebenza njani le console intsha, enikwe amathandabuzo rhoqo malunga nokuba ebesazi indlela yokujonga imveliso ngokufanelekileyo kubathengi. INintendo ithathe ixesha elide ukuba ibone impazamo yayo kwaye iye yaxabisa inkampani imali eninzi eqhubeka nokubheja kule khonsoli nangona ibinentengiso encinci.
Ukuba uphawu ngeNintendo lusungula ikhonsoli entsha kwaye kwiinyanga zokuqala aluphumeleli, kukho into eyenzekayo, nento engalunganga. Okwangoku lUkutshintsha kweNintendo kubonisa isimilo esihle kodwa kude kube kufikelela kwintengiso Kwaye makhe sijonge uluhlu lwemidlalo enokuthi ibonelele, ngekhe sikwazi ukuvavanya ukuba uNintendo uphinde wakhwela kwakhona okanye ngokuchaseneyo ngeli xesha ubethe isikhonkwane entloko kwaye kwakhona uqinisekisa indawo enelungelo emhlabeni yeengcebiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ukuphela kwemveliso ye-Wii U kuqinisekisiwe
I-BlackBerry yamva nje eyenziwe yinkampani iya kuba nekhibhodi ebonakalayo
I-WhatsApp isebenzise inkqubo yayo yokhuseleko kumanyathelo amabini